Andian’olona nihazo ny CENI Rakotra mpitandro ny filaminana tetsy Alarobia
Nisy ireo andian’olona nifamory teny amin’ny Gymnase Ankorondrano omaly antoandro, ary samy nilaza ny zavatra hitany tamin’ny fizotran’ny fifidianana.
Namotsipotsitra ireo lesoka niainany toy ny resaka lisi-pifidianana tsy tomombana, kara-pifidianana tsy azo kanefa nisy nanana roa, ny zava-nisy tany amin’ny fanisam-bato izay nisiana endrika hosoka sy fanodinkondinana safidim-bahoaka. Nilaza izy ireo fa tsy misy kandida na olona maniraka fa noho ny fahatsapana ny zavatra tsy sy ny fanaovana tsinontsinona ny zo maha olom-pirenena azy no mampihetsika azy. Nandeha nivantana tamina fahitalavitra iray teto an-drenivohitra moa izany. Nilanja sora-baventy izy ireo, ary rehefa nivoaka avy teny Ankorondrano, dia nihazo ny foiben’ny CENI tetsy alarobia naneho ny tsy fahafaliany. Efa niatrana teny an-toerana kosa ny mpitandro filaminana nisorohana ny mety ho fihoaram-pefy, ka voadidina tanteraka ity vaomiera misahana ny fifidianana ity. Novoizina tany anaty tambajotran-tserasera ary nentina nanasoketana kandida ho mampaniraka olona handoro ny CENI mihitsy ity resaka ity, raha ny resaka niniana novoizina. Mandeha ny teti-dratsy samihafa hifanosoram-potaka, toy ny fampiasana t-shirt, saingy hatreto aloha tsy mbola nisy kandida filoha nilaza ofisialy ho naniraka an’ireto andian’olona izay milaza fa maneho hevitra amin’ny maha olom-pirenena azy. Na inona aloha ezaka atao amin’izao, dia nisy ny lesoka, saika ireo kandida rehetra no nitondra fanakianana. Azo atao foana anefa no maka lesona tamin’ny zava-nisy hita fa nisy lesoka. Tsy hay na fifandrifian-javatra ihany fa taorian’ny fisintahan’ny solontenan’ny kandida iray nanara-maso tao amin’ny CENI no nisian’ireo andian’olona nihetsika ireo.